Omume Kachasị mma maka Mgbasa Ozi Email nye Ndị Na-emetụta | Martech Zone
Ebe ọ bụ na ndị ọrụ mmekọrịta ọha na eze na-akụ anyị kwa ụbọchị, anyị ga-ahụ nke kachasị mma na njọ izipu ozi ịntanetị. Anyị akọrọla mbụ esi dee ụda dị irè na ihe omuma ihe omuma a bu ihe di oke nma nke gunyere otutu oganihu.
Nke bụ eziokwu bụ na ụlọ ọrụ kwesịrị ịzụlite mmata na ikike maka akara ha n'ịntanetị. Ide ederede ezughi ezu, ikike ịkọpụta ọdịnaya buru ibu ma kesaa ya dị oke mkpa na atụmatụ ịre ahịa ọdịnaya ọ bụla. Nwere ike ịkwụ ụgwọ maka nkwalite, mana nke ahụ agaghị emepe emepe sitere n'okike na igwe nyocha na-elebara anya.
N'ihe ahia ahia di iche iche na -emepụta ma na-azụlite mmekọrịta na-aga n'ihu site na iweta ndị ọzọ na akara gị. Ọbụna na ịrị elu nke mgbasa ozi mmekọrịta na ntinye aka na ngwa, email ka bụ otu n'ime ụzọ kachasị ike iji tinye aka na ndị ọzọ maka akara gị (ọ bụrụ na emechara ya!).
Nzọụkwụ maka Developzụlite Usoro Mgbasa Ozi Email
Kọwaa Ihe Mgbaru Ọsọ - ebumnuche nwere ike ịgụnye iwu ụlọ, ịmị ire, ịgba ume ịkekọrịta ọdịnaya (dị ka infographic), nyocha, itinye obodo, ma ọ bụ iwebata.
Chọpụta Ndị Na-ege Ntị - ị na-echebara ndị na-ede blọgụ, ndị nwe saịtị, ndị nta akụkọ, ndị na-ebipụta akwụkwọ, agụmakwụkwọ, gọọmentị, ma ọ bụ ndị na-abaghị uru?
Gụgharịa, Nnwale, Tinyegharịa - Gbaa mbọ hụ na njikọ njikọ gị na-arụ ọrụ, jiri ụmape edezi edezi, ma hụ na ụtọ asụsụ ziri ezi, ma dekwaa nkenke ma sie ike.
a ozi sitere na Nkwupụta Agụmakwụkwọ Online na-ejegharị na ọkwa ọ bụla anakọtara na ozi ịntanetị, ihe na-arụ ọrụ, ihe anaghị arụ ọrụ, yana ihe ị ga-ezere kpamkpam. Nke a gụnyere oge nke ụbọchị, ụbọchị nke izu, ahịrị isiokwu, mkpụrụokwu iji, ọnụọgụ nke mbọ, etu ozi ahụ, na ndị ọzọ. Otu ihe na-atọ ụtọ nke a na-ekekọrịta na infographic a bụ 1 nnukwu blogger na-enwe mmetụta nha nke ndị na-ede blọgụ obere oge 6.
Tags: gaa blogger outreachụbọchị izuemail agbaliemail Marketingozi emailnzisa ozi emailemail nyochagharịnyocha emailonye nta akụkọọnụ ọgụgụ nke mgbalịakụkọ ntanetịije ozigbowepụta omume kacha mmaozi emailisiokwuoge nke ụbọchị